मेलम्ची आयोजनाको निर्माण पूरा हुन अझै ६ महिना लाग्ने ! - Samudrapari.com
मेलम्ची आयोजनाको निर्माण पूरा हुन अझै ६ महिना लाग्ने !
काठमाडौं – उपत्यकाको तिर्खा मेटाउने लक्ष्यले अघि बढाइएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माण निर्धारित समयमै नसकिने सम्भावना बढ्दै गएको छ ।
विसं २०५५ कार्तिक २३ गतेबाट सुरु गरिएको आयोजना सम्पन्न भएपछि काकाकुल काठमाडौंबासीले राहतको महसुस गर्ने अपेक्षामा आयोजनामा भएको ढिलाईले पुनःएकपटक तुषारापात गरिदिएको छ । नयाँ वर्षको उपहार स्वरुप मेलम्चीको पानी उपत्यकामा खसाल्ने सपना बाँडेको आयोजनाले समय घर्किदै गरेका बेला निर्माण सम्पन्न हुन अझै ६ महिना कुर्नुपर्ने संकेत गरेको छ ।
आयोजना अन्तर्गत मेलम्ची खोलाको पानीलाई काठमाडौं उपत्यकामा भित्र्याउनका खन्नुपर्ने २७ दशमलव ५८ किलोमिटर मध्ये अब ४ सय १२ मिटर मात्रै खन्न बाँकी छ । तर फिनिसिङ र हेडवक्र्सको कामका साथै सुरङ्गभित्र ढलान लगायत अन्य कामका लागि समय लाग्ने भएकाले पनि काममा ढिलाइ भएको हो । मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका सूचना अधिकारी राजेन्द्रप्रसाद पन्त भौगोलिक जटिलताका कारण कामदारको सुरक्षामा सम्झौता गर्ने स्थिती नभएकाले फाष्ट ट्रयाकमा काम गर्न नसकिने बताउनुहुन्छ ।
हाल दैनिक बढीमा ३ मिटर मात्रै सुरुङ खन्ने काम हुँदैछ । यसअघि दैनिक १७ मिटरसम्म खन्ने गरिएको थियो । पुराना औजार, ठेकेदारको कमजोर कार्यक्षमता, निर्माण सामग्री आयात तथा कमजोर भौगोलिक अवस्थाले लक्ष्यअनुसार काम नभएको उहाँ स्वीकार्नुहुन्छ । यो हिसाबले पनि २०७५ सालको बैशाखमा मेलम्चीको पानी आउने सम्भावना कम छ ।
सन् २०१३ को सेप्टेम्बरसम्म काम सक्ने गरी सन् २००९ मा सुरुङको ठेक्का लिएको चाइना रेल्वेको काममा ढिलासुस्ती भएको भन्दै सन् २०१२ मा सम्झौता तोडिएको थियो । त्यसयता सुरुङ निर्माणको काम इटालीको सीएमसी कम्पनीले गरिरहेको छ ।